Fiaraha-miasa : ho tanàna mpirahavavy i Alaotra sy i Hunan | NewsMada
Fiaraha-miasa : ho tanàna mpirahavavy i Alaotra sy i Hunan
Vita sonia ny fiandohan’ny volana jona teo ny fifanarahana savaranonando hahatongavana ho tanàna mpirahavavy ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritany any Sina, Hunan. Hidina ifotony any Alaotra ny teknisianina sinoa hijery ny zava-misy amin’ny volana jolay ho avy izao. Raha tsy misy ny olana, hatao sonia amin’ny taona 2018 ny fifanarahana farany mirakitra izany.
Isan’ny vy nahitana ity soso-kevitra ity ny orinasa sinoa Yuan’s Madagasikara, manaparitaka ny karazam-bary safiotra any Alaotra Mangoro. Nambaran’ny lehiben’ny faritra, Ranarisoa Desiré, fa mahabe fanantenana ny lafiny tany satria fambolena sy fiompiana ary harena an-kibon’ny tany koa no foto-karen’ny tanàn’i Hunan. Vonona hanala ny fotaka manototra ny faritr’Alaotra ny Sinoa. Hitan’ny sary avy amin’ny zana-bolana koa ny akora ilaina amin’ny fanamboarana fitaratra ato amin’ny faritra, ary efa misy ny savaranonando hijerena ny fiaraha-miasa amin’izany.
Indro kely amin’ity fiaraha-miasa amin’ny Sinoa ity ny tranga tany Soamahamanina. Tsikaritra fa somary malaina ny mponina aty Antsihanaka handray azy ireo. Tsy manazava ny tena fifanarahana amin’ny fanjakana sinoa rahateo ny fitondrana malagasy.